Ungakhangisa Kanjani ku-Pinterest | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJuni 6, i-2014 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 Douglas Karr
Akufanele kumangaliswe ukuthi imithombo yezindaba ebonwayo ishayela amazinga wokuguqula amahle kakhulu ekukhangiseni okuku-inthanethi… kanti nePinterest iyathinteka. Kwi funda kusuka kwaShopify kuhlaziywa ukuvakashelwa okuyizigidi ezingama-37, kutholakale ukuthi iPinterest ihole amazinga wokuguqulwa kwe-e-commerce aseMelika.
Njengoba abathengi bephina futhi bephindaphinda ngamakhulu ezigidi, abathengisi abaningi balwela ukukhulisa amandla we-Pinterest yemikhiqizo yabo. Bheka lo mhlahlandlela wokukhangisa we-Pinterest osebenzayo bese uqala ukuphina indlela yakho eya empumelelweni.
Izabelomali zemithombo yezokuxhumana kulindeleke ukuba zibhekele u-18% wesabelomali esiphelele sokukhangisa eminyakeni emihlanu ezayo… okwenza iPinterest ibukeke njengotshalomali oluhle impela! Ukuze uqalise, uma usuvele unayo i-akhawunti yakho ye-Pinterest uzodinga uguqulele lokho ku-akhawunti yebhizinisi. Ngaleso sikhathi, i-akhawunti yakho izokwazi ukufinyelela amathuluzi angeziwe futhi ungabhalisela izikhonkwane eziphakanyisiwe. Ukukhangisa okuhle!
Tags: khangisa ku-pinterestindlelaungakhangisa kanjani ku-pinterestPinterestukukhangisa kwe-pinterest